Duulimaadyo badan oo London, Kyiv iyo Istanbul ku socda Air Astana hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyo badan oo London, Kyiv iyo Istanbul ku socda Air Astana hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kazakhstan • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Turkiga • Wararka UK • Ukraine War Deg Deg Ah • Wararka kala duwan
Air Astana ayaa ku dhawaaqday in la kordhiyay inta jeer ee ay tagaan Ukraine iyo Turkiga, waxayna dib u bilaabaan duulimaadyadii London.
Air Astana waxay kordhisaa jadwalka Istanbul.
Air Astana waxay ku daraysaa duulimaadyo badan oo Kyiv ah.
Air Astana waxay dib u bilaabi doontaa duulimaadyadii London tooska ahaa ee Nuur-Suldaan.
Air Astana waxay soo bandhigtay soo noqnoqosho dheeri ah oo u dhexeysa Kyiv iyo Nur-Sultan Talaadadii, Sebtember 7, 2021, iyada oo caasimadaha Kazakhstan iyo Ukraine ay hadda ku xirnaayeen saddex jeer toddobaadkii Isniinta. Talaado iyo Khamiis. Shirkaddu waxay kaloo maamushaa duulimaadyo u dhexeeya Kyiv iyo Almaty Arbacada, Sabtida iyo Axadaha.
Air Astana waxay sidoo kale bilaabi doontaa soo noqnoqoshada saddexaad inta u dhaxaysa Istanbul iyo Almaty 17-kii Sebtembar 2021, iyadoo duulimaadyadu ahaayeen Talaado, Jimce iyo Axad, iyo sidoo kale adeeg u dhexeeya Istanbul iyo Nur-Sultan Khamiista.
Hawada Astana sidoo kale wuxuu dib u bilaabayaa duulimaadyadii tooska ahaa ee London ilaa Nuur-Suldaan toddobaadkii laba jeer Arbacada iyo Sabtida laga bilaabo 18-ka Sebtember, 2021.
Rakaabka waxaa si naxariis leh looga codsanayaa inay raacaan shuruudaha gelitaanka kahor duulimaadka Air Astana website.
Air Astana waa calanka sida Kazakhstan, oo fadhigiisu yahay Almaty. Waxay ka shaqeysaa adeegyada jadwalka, gudaha iyo kuwa caalamiga ah 64 marin oo laga soo qaado xarunteeda weyn, Almaty International Airport, iyo xarunta labaad, Nursultan Nazarbayev International Airport.